Abavelisi beRadio yeRadio PCB | I-China iRadio yeRadio yeFlexile yeeFektri kunye nabaXhasi
Le yibhodi yesekethe ye-RF yomaleko we-10 kumzi mveliso wefowuni. I-RF PCB ifuna ii-laminates ngombane okhethekileyo, obushushu, oomatshini, okanye ezinye izinto zokusebenza ezigqitha kwezo zemigangatho yemveli ye-FR-4. Ngeminyaka yethu emininzi yamava nge-PTFE-based microwave laminate, siyaqonda ukuthembeka okuphezulu kunye neemfuno zokunyamezelana ngokuqinileyo kwezicelo ezininzi.
Le yibhodi yesekethe ye-RF yomaleko we-6 kumzi mveliso wefowuni. I-RF PCB ifuna ii-laminates ngombane okhethekileyo, obushushu, oomatshini, okanye ezinye izinto zokusebenza ezigqitha kwezo zemigangatho yemveli ye-FR-4. Ngeminyaka yethu emininzi yamava nge-PTFE-based microwave laminate, siyaqonda ukuthembeka okuphezulu kunye neemfuno zokunyamezelana ngokuqinileyo kwezicelo ezininzi.
Le yibhodi yesibini yesekethe yeRF yeshishini lomnxeba. I-RF PCB ifuna ii-laminates ngombane okhethekileyo, obushushu, oomatshini, okanye ezinye izinto zokusebenza ezigqitha kwezo zemigangatho yemveli ye-FR-4. Ngeminyaka yethu emininzi yamava nge-PTFE-based microwave laminate, siyaqonda ukuthembeka okuphezulu kunye neemfuno zokunyamezelana ngokuqinileyo kwezicelo ezininzi.